Ihe ijuanya 'Shang-Chi' Trailer dị ebe a iji dobe gị na ihu - iHorror
Home Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ Ihe ijuanya 'Shang-Chi' Trailer dị ebe a iji dobe gị na ihu
edere ya Trey Hilburn III April 19, 2021
Ysmụ okorobịa. Mụ okorobịa! Unu! Na Shang-Chi ụgbọala na-adọkpụ dị ebe a ma uche anyị ka ọfụma. The insanely badass trailer maka Shang-Chi na Akụkọ mgbe ochie emeela ka ọtụtụ ihe dị ịtụnanya n'ọdịnihu na-atụ anya ya.
Ntughari ohuru n'ime ihe ijuanya bu ihe kachasi ike ma n'èzí igbe ebe Ẹkekpemede nke Galaxy. Na dị ka ẹkekpemede bụ nnukwu ihe na-atụghị anya ya, nke a na-ele anya ịdọrọ otu ụdị ịgba kung-fu.
Shang-Chi mebere nke anọ nke ihe nkiri Marvel. Ọ na-eme ka anyị mata ụfọdụ ọrụ dị ịtụnanya mana ọ kachasị mkpa na ọ na-ewebata ụwa ga-ejikọ ụwa nke Steven Strange. Nke a na-aka bụ ihe kasị akpali akpali nke ọ bụla. O yikwara ka ọ na-enwe ohere kachasị na ọdịnaya ya. Echere m, kung-fu na Marvel ga-abụ ihe ọjọọ, ee. Mana, emebeghị ya tupu mgbe ahụ. Love gha ahụ n'anya maka nke a.
Gịnị ka unu na-eche banyere ọhụụ ọhụrụ maka Shang-Chi na Akụkọ Mgbe Ochie Nke Iri? Mee ka anyi mara na ngalaba a.
The ụgbọala na-adọkpụ maka Lovehụnanya, Ọnwụ + Robots Mpịakọta 2 anya kpamkpam uche ịfụ. Lelee ya ebe a.
'Ọbara miri' Trailer na-enye gị Jaws Ripoff n'adịghị ka ihe ọ bụla ị chere na ọ ga-ekwe omume